FHI: Ilaa hada tiradan ayaa Norway laga helay hargabka Corona-Virus. - NorSom News
FHI: Ilaa hada tiradan ayaa Norway laga helay hargabka Corona-Virus.
Waaxda qaabilsan ilaalinta caafimaadka dadweynaha(FHI) ayaa saacad kahor soo saartay tiradii ugu danbeysay ee dadka Norway gudaheed laga helay viruska hargabka Corona.
169 qof ayay FHI sheegtay in laga helay viruska, waxaana tirada maanta kusoo korortay 22 qof.
Ugu yaraan 109 qof oo dadka hargabka laga helay kamid ah ayaa hargabka kasoo qaaday dalalka Talyaaniga iyo Austria oo ay safar ku tageen. Halka dadka kale intooda badan ay yihiin qaraabada dadka safarka ku tagay Talyaaniga iyo Austria.
Hey´adda ayaa dhamaan dadka isaga shakisan inay hargabka qaadi karaan ugu baaqeyso inay lasoo xiriiraan hey´addaha caafimaadka si loo baaro, loogana hortago faafista cudurkaas.
Warbaahinta Norway ayaa isbuucii tagay si daqiiqad ah uga hadleyso dad laga helay hargabka, iyo siyaabaha kala duwan oo ay ku qaadeen.
Goboladan ayay kunoolyihiin dadka hargabka laga helay:
Previous articleTalyaaniga: 3 qof oo soomaali ah oo laga helay hargabka Corona-Virus.
Next articleSSB: Ku dhawaad 15% waa ajaaniib.